Madax Xafiiseedyada Beeraha 68da Degmo Oo Shir Loo Qabtay - Cakaara News
Madax Xafiiseedyada Beeraha 68da Degmo Oo Shir Loo Qabtay
Jigjiga(cakaaranews)Axad 17ka April 2016, Shir balaadhan oo uu soo agaasimay Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga ah islamarkaana ay kasoo qaybgaleen dhamaan madax xafiiseeyada xafiiska beeraha xoolaha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee dhamaan 68 degmo ayaa maanta kadhacay hoolka shirarka ee isla xafiiska.
Hadaba shirkan oo ahaa shir wada tashi ah islamarkaana lagaga wada hadlayay jihooyinka horumarineed ee waxsoosaarka beeraha iyo waliba u diyaargarawga fulinta qorshaha kobaca iyo isbadalka dhaqaalaha wajigiisa 2aad (GTP2) ayaa waxaa furitaankiisii ugu horayn ka hadlay Wasiir kuxigeenka Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta khayraadka Dabiiciga ah mudane Guuleed Awcali oo sheegay in shirkan ujeedadiisu tahay sidii madax xafiisyada beeraha xoolaha iyo horumarinta reermiyigu ee 68 dagmo ay uga talo bixin lahaayeen qorshaha 5ta sano ee u yaala deegaanka gaar ahaan sectorka beeraha islamarkaana larabo inay ka soojeediyaan wixii su’aal iyo fikir ah ee ku aadan hirgalinta qorshaha (GTP2)
Dhinaca kale wuxuu wasiir-kuxigeenku soo jeediyay qorshaha GTP2 ee u dagan Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga DDSI. isagoo carabka ku dhuftay in cadadka dhulka ee wax soosaarka beeraha ku haboon iyo kafaaiidaysiga wabiyada aysan jirin cid kale ama deegaankale oo haysta. Sidookale wuxuu xusay in sida ugu fiican ee looga faa’iidaysanyo ay tahay xoojinta tirada iyo tayada dhul-beeraadka, kor u qaadida adeega fidinta beeraha, iyo waliba adeegsiga qalabyada casriga ah ee beeraha.
Sidookale wasiir-kuxigeenka oo hadalkiisii sii wata ayaa xusay in ay lagama maarmaan tahay in kor looqaado waxsoosaarka beeraha si loo fuliyo yoolka iyo himoolooyinka deegaanka u yaala ee ah in laga qalin jabiyo saboolnimada islamarkaana dalku kamid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhaxdhaxaadka yahay. Wuxuuna hadlakiisii ku soo gunaanaday in madax xafiiseedkasta oo guriga fadhiya uu kaqaato doorka kaga aadan islamarkaana loo guntado sidii loo fulin lahaa qorshayaashaas isagoo carbka kudhuftay in iyana xaqiiqda lagu saleeyo nidaamka xog uruurinta hawlaha horumarinta beeraha ee dagmo kasta. Wada shaqayntuna ay ahaato mid update ah.
Ugudanbayna dhagasiga iyo akhrinta qorshihii lasoobandhigay ayaa waxaa iyaguna su’aalo, fikiro iyo talobixinba ka soojeediyay qaar kamida madax xafiiseedyadii shirka fadhiyay kadibna waxaa si wada jir ah la isula qaatay ansixinta qorshaha iyo u diyargarawga fulintiisa.